Khipha ku-internet ngokwezifiso Pole Amafulegi Ukukhiqiza futhi Factory | UJesson Flag Ubuciko Nemisebenzi
Ukuthola amafulegi enziwe ngezifiso owasebenzisela wena uqobo, ibhizinisi, inhlangano noma umcimbi okhethekile akukaze kube lula, noma kwanelise ngokwengeziwe. I-CFM yenza lula inqubo futhi ihambise ubuciko bekhwalithi, obenzelwe imininingwane yakho, yezinhlobo ezahlukahlukene zefulegi: amafulegi wangokwezifiso we-pennant, ukukhangisa amafulegi angaphandle, amabhanela wokwenza ngokwezifiso, amabhanela enziwe ngezifiso, amafulegi wesiko lama-burgee, kanye namafulegi amakhulu angokwezifiso.
Amafulegi Wokwezifiso Asuka Kubuciko Bakho
Kusuka kumalogo, izifanekiselo zeklabhu, ukhilimu, ngisho nokupenda kwesandla sengane yakho, i-CFM ingaphenduka noma yimaphi amafulegi wangokwezifiso ngokuvumelana nayo yonke imfuneko yekhasimende. Indlela enhle nenesitayela yamafulegi wangokwezifiso kusho ukuthi cishe noma imuphi umcimbi ungathuthukiswa yile mikhiqizo emincane kodwa eyakhiwe ngokuphelele.
I-CFM Inikeza Izinketho Eziningi Zamafulegi Enziwe Ngokwezifiso
Ukukusiza ukuthi udale amafulegi enziwe ngokwezifiso owadingayo, sinikeza izinketho ezahlukahlukene. Sikunikeza uhlu lwezinto ongakhetha kuzo ukulingana nesabelomali sakho samafulegi enziwe ngokwezifiso nokunikeza ukuqina nobude bempilo obudingekayo, kuya ngokuthi uzosebenzisa amafulegi wakho aprintiwe ngokwezifiso isikhathi eside, ngezikhathi ezikhethekile kuphela, ukusetshenziswa kwasendlini kuphela, noma ukusetshenziswa kwangaphandle, lapho bezoboniswa khona umoya, imvula nelanga.
250g Soft wathungela
I-Polyester engu-165g 300D
Imikhono Yemikhono Ehlukanisiwe
Ifulegi lethu lomkhono wesigxobo liyithuluzi elihle lokuguqula i-logo yakho noma imidwebo ibe yinto enamandla endizayo. Ukuphrinta kwedijithali kwamukelwa ukuqinisekisa ukuthi izithombe eziyinkimbinkimbi nemibala zingaphrintwa ngokuphelele ngokulungiswa okuphezulu. Amafulegi ethu e-premium pole afanele noma yimuphi umsebenzi wokuphromotha futhi akusiza ukuthi uqoqe ukunakwa okusheshayo kwamakhasimende akho angaba khona kungakapheli imizuzu!
Ubukhulu obuhlukahlukene nobubunjwa bezinketho zakho
Ukuhlinzeka ngesipiliyoni esingcono esenziwe ngokwezifiso kumakhasimende ethu, i-CFM inikeza osayizi abahlukahlukene ngokwezifiso nomumo wangokwezifiso ukuhlangabezana nemininingwane yakho. Osayizi abajwayelekile bafaka u-2 'x 3', 3 'x 5', 4 'x 6', 5 'x 8', 6 'x 10', nosayizi wangokwezifiso, njengo-60 x 90cm, 150 x 90cm, 90 x 180cm, 1m x 2m, njll .. ziyatholakala.
I-Pole Yesiko Ngokwezifiso
Kufakwa Amalebula Wethebula Lokufaka